Fanadiovana mahery vaika :: Ho avy ny fepetra goavana ho an’ireo polisy marobe • AoRaha
Polisy marobe no ho voakasika! Hiroso tsy ho ela intsony amin’ny famindrana toerana ireo polisy rehetra naharitra mihoatra ny dimy taona tamin’ny toerana iray ny eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka na ny Msp. Tafatsangana omaly ny Vaomiera manokana hisahana an’io fifamindran-toerana io. “Tsy maintsy atao izao. Tsy hisy fanavahana na iza na iza”, hoy ny Contrôleur Général Rafanomezantsoa Roger, minisitry ny Filaminam-bahoaka. Isan’ny lesoka goavana miteraka resabe ny fahamaroan’ireo polisy miasa amin’ny toerana iray mandritra taona maro. Misy mihitsy no tsy niala teo amin’ilay toerana hatramin’ny naha polisy azy efa ho folo taona, araka nambaran’ny loharanom-baovao iray.
Hiandry fialan-tsasatra lehibe
Nanazava ny Msp fa: “ho voakasika amin’io fepetra io avokoa ireo polisy rehetra manerana an’i Madagasikara. Manomboka izao no hiasa sahady ilay Vaomiera manokana natsangana. Amin’ny fialan-tsasatra lehiben’ny mpianatra kosa vao hirosoana ny fampiharana ny famindran-toerana”, hoy izy.
Hitondra fiovana lehibe izao fepetra horaisin’ny fanjakana izao. Isan’ireo naneho ny hafaliany, ohatra, ny filohan’ny kaoperativam-pitate-rana iray eto an-drenivohitra. “Efa mifankahafantatra amin’ ireo mpamily taksibe ny maro amin’ireo polisy miasa eto an-drenivohitra. Na misy aza ny fepetra raisinay ato amin’ny kaoperativa dia minia manao ny ataony ihany ireo mpamily vokatr’io fifankafantarana io. Na ireo polisy mandamina fifamoivoizana na ireo mitondra môtô dia misy ireo efa am-polon-taonany tsy niala teto an-drenivohitra”, hoy ity filohana kaoperativa ity.
Ezaka fampihenana ny fitohanan’ny fifamoivoizana
Nandany tontolo andro nidina ifitony nijery ny hevitra handaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra mba hanamaivanana ny fitohanana ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Polisim-pirenena, omaly. Toerana telo no nahitana azy ireo ary nilatsaka an-tsehatra nandamina mihitsy ny minisitry ny Polisy: teny Anosy, Analakely ary Antanimena.
“Misy fepetra tsy maintsy horaisina miaraka amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy mba hialana amin’io fitohanana lavareny io. Isan’ireny ny fanalalahana ny arabe, ny fampihenana ny halehiben’ny toeram-pihodinana, toy ny eo Antanimena sy ny maro hafa. Tsy maintsy ahitam-bokany ireo fepetra ireo afaka andro vitsy ary hisitraka izany ny mponina eto an-drenivohitra”, hoy ny Contrôleur Général, Rafanomezantsoa Roger.
Tsy izay ihany fa fantatra ihany koa fa isan’ny antony nidinan’ireo tompon’andraikitra teny an’arabe ny fijerena ny fepetra noraisin’izy ireo amin’ny fandaminana ny fifamoivoizana. “Betsaka ireo polisy no naparitaka amin’izao fotoana izao. Mampianatra sy manoro izay tokony hatao izy ireo ho an’ireo mpampiasa lalana mialoha ny hiverenan’ny fisavana taratasina moto sy fiara mivezivezy”, hoy hatrany ny Msp.
Lozam-pifamoivoizana :: Mpitondra môtô maty voahitsaky ny fiara
Fiondranana an-tsokosoko :: Mpitsoa-ponenana efa-dahy tratra tany Nosy Be